ड्रोनको माध्यम बाट औसधि बोकेर गाउँ-गाउँ पुग्दै महाबिर पुन : उहालाई उच्च सम्मानको लागि सक्दो सेयर गर्नुहोस् - Mitho Khabar
ड्रोनको माध्यम बाट औसधि बोकेर गाउँ-गाउँ पुग्दै महाबिर पुन : उहालाई उच्च सम्मानको लागि सक्दो सेयर गर्नुहोस्
April 16, 2020 mithokhabarLeaveaComment on ड्रोनको माध्यम बाट औसधि बोकेर गाउँ-गाउँ पुग्दै महाबिर पुन : उहालाई उच्च सम्मानको लागि सक्दो सेयर गर्नुहोस्
काठमाडौ : पहाडि क्षेत्रमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुग्न विभिन्न कठिनाइ व्यहोर्नुपर्छ । त्यसैले भौगोलिक रुपमा वि’कट रहेका त्यस्ता स्थानहरुमा औष’धि पु-याउन हामीले ड्रोनको प’रिकल्पना गरेका हौँ ।
एसियाको नोबेल पुरस्कारको रुपमा हेरिने म्यागासेसे पु’रस्कार वि’जेता महावीर पुनले राष्ट्रि’य आवि’ष्कार के’न्द्रमार्फत विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका छन् । उनीसँग मिलेर सयौँ इन्जिनियर नेपाली प’रिवेश सुहाउँदो आवि’ष्कारमा के’न्द्रित छन् ।
काठमाडौं, चितवन, धरान, जनकपुर र पोखरामा अनुस’न्धानको काम भइरहेका छन् । आवि’ष्कार के’न्द्रले अहिले कृ’षि, इन्जिनियरिङ, शिक्षा, बायो’मेडिकल, पर्यट’नलगायतका १६ क्षे’त्रमा अ’नुसन्धान तथा परीक्ष’ण गरिरहेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा म’हत्वपूर्ण काम मेडिकल ड्रोनको आ’विष्कार अ’न्तिम च’रणमा पुगेको छ ।
मेडिकल ड्रोनले नेपालका भौगो’लिक हिसाबले वि’कट स्थानमा रहेका हेल्प पोस्टहरुमा स्व’चालित मानवरहित प्र’विधिको माध्यमबाट औषधि पु-याउने काम गर्नेछ । नेपालमा मेडिकल ड्रोनको आ’विष्कारले अन्तर्रा’ष्ट्रियस्तरको ध्यानसमेत खिच्ने देखिन्छ । यसै सन्द’र्भमा के’न्द्रित रहेर इन्जि’नियर्स नेपालले आविष्कार के’न्द्रमा अध्यक्ष पुनसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंहरु यतिबेला ‘मेडिकल ड्रोन’को आवि’ष्कारमा लाग्नुभएको छ । काम कहाँसम्म पु¥याउनुभयो ? हामीले यसमा काम गरेको दुई वर्षजति भयो । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ राम्चे भन्ने ठाउँमा २०७४ सालमा एक किलो औ’षधि बोकाएर ड्रोन पठाएका थियौँ । त्यो हाम्रो परी’क्षण थियो ।
त्यसपछि पनि विभिन्न ठाउँमा उडान ग-यौँ । त्यस क्रममा देखिएका कमी–क’मजोरीलाई सच्याउने काम भइरहेको छ । यो प्रा’विधिक रुपमा निकै जटिल काम हो । अहिले हाम्रा इन्जिनियर भाइबहिनीहरुले ८० प्रतिशत जति काम गरिसक्नुभएको छ । यस हिसाबले काम निकै अघि बढिसकेको छ । हामी सफल भइसकेका छौँ ।
अहिले के–कस्ता प’क्षमा काम भइरहेको छ ?
आ’विष्कार के’न्द्रले ड्रोन बनाउन शून्यबाटै काम सुरु गरेको हो । ल्याबमा लामो समयको मेकानिकल, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक्स कामपछि बल्ल ड्रोन बनेको हो । त्यसपछि परी’क्षण ग-यौँ । परी’क्षण गरेपछि देखिएका समस्या समाधानको काम यतिबेला भइरहेको छ ।
कीर्तिपुरमा पटक–पटक प’रीक्षण उडान भइरहेका छन् । त्यसपछि देखिने समस्याको प्रावि’धिक रुपमा हल गरिरहेका छौँ । समग्रमा भन्नुपर्दा आठवटा पंखा र दुईवटा पखेटा भएको जहाजजस्तै उड्ने मेडिकल ड्रोन आ’विष्कार के’न्द्रको रि’सर्च ल्याबमा उड्नका लागि केही समयमै तयार हुनेछ ।
संख्या’त्मक रुपमा ड्रोन कति हुनेछन् र यसका वि’शेषताहरु के–के छन् ?
अहिले करिब १६ वटा ड्रोन बनाउनका लागि सामानहरु जोडिँदै छ । त्यसका किसिमहरु पनि फरक–फरक छन् । एक किसिमका तीन अथवा चार वटा ड्रोन बनाउने गरी काम भइरहेको छ । म्याग्दीमा उडेको ड्रोन पहिलो भर्सनको थियो । अहिले ड्रोनको तेस्रो भ’र्सनमा काम भइरहेको छ ।
चार–पाँच किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न सक्ने ड्रोनलाई ‘मल्टि रोटर’ भनिन्छ । अर्को भनेको ‘फिक्स विन्ज ड्रोन’ हो । जसले २० देखि २५ किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न सक्छ । त्यस्तै, ‘हाइ’ब्रिड ड्रोन’ आवश्यक परेको ख’ण्डमा कुनै ठाउँमा बस्न र कुनै सामान ल्याउन सक्ने क्षमता राख्छ । यसको दू’री ठ्याक्कै यति भन्ने हुँदैन । यो ड्रोनले उचाइअनुसार यात्रा गर्छ । हामीले यी सबै ड्रोनमा काम गरिरहेका छौँ ।
न खाने चिज छ न जाने ठाउँ (SHARE गरि निकायसम्म पुरौ)
कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सतर्कता अपनाउन प्राधिकरणकाे आग्रह
March 20, 2020 Arjun Thapa